Gaalkacyo:-Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa ka hadlay dilkii loo geystay alaha u naxariistee Nabadoon Aadan Faarax Dheere oo xalay lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug waxaa kale oo uu ka hadlay afduub ka dhacay shalay magaalada Gaalkacyo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa marka hore tacsi u diray eheladii uu ka geeriyooday Nabadoon Aadan Faarax Dheere wuxuuna sheegay in dilkiisa uu qeyb ka yahay dilalka lala beegsanayo dadka indhaha u ah magaalada Gaaalkacyo wuxuuna sheegay in ay baaritaan socdaan.
Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey ayaa waxaa kale oo uu ka hadalay afduub loo geystay dad rakaab ah oo ka yimid Degmada Goldogob kuna soo jeeday magaalada Gaalkacyo kuwaas oo gaaraya ilaa 5 qof wuxuuna sheegay in ay qafaasheen ehelada mid ka mid ah dhalinyaro ay maamulka Puntland sheegeen in ay yihiin kuwa ka tirsan Ururka Al-Shabaab laguna qabtay boorso weyn oo ay ka buuxaan walxaha qarxa.
Dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa ka hadlay xariga Cabdirisaaq Xuseen Tahliil (Ilkacase) wuxuuna beeniyey in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab wuxuuna sheegay in uu ahaa ganacsade ka xamaasha magaalada Gaalkacyo.
Wasiirka warfaafinta ee Galmudug ayaa baaq u diray Maamulka Puntland wuxuuna ku baaqay in si dhaqso ah loo sii daayo Cabdirisaaq Xuseen Tahliil (Ilkacase).